Ahoana ny famoahana ny lakilen'ny WiFi amin'ny Android: apps hamoahana ny WiFi | Androidsis
Esory ny bokotra WiFi amin'ny Android
Pablo Aparicio | | About us, Android cheat
Iza no tsy te hianatra ny fomba famoahana ny lakilen'ny WiFi? Ity dia zavatra izay mihatra amin'ny fifandraisana Internet ihany koa. Efa elaela izay isika vao afaka mankafy fifandraisana tsy mila mampiasa tariby, fantatra amin'ny anarana hoe Wifi. Ny tombony azo amin'ny fampiasana fifandraisana Wi-Fi dia betsaka, toy ny tsy mila fametrahana fanampiny, afaka mivezivezy malalaka amin'ny tranontsika miaraka amin'ny fitaovana mifandray ary mifamatotra amin'ny rindrina eo anelanelan'ny fitaovantsika sy ny router. Misy tombony hafa koa io, fa ho an'ireo izay tsy te handoa ny fifandraisana: afaka izy ireo esory ny bokotra WiFi avy amin'ny mpifanolo-bodirindrina amintsika mba hifandray amin'ny Internet nefa tsy mandoa.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny famadihana ny lakilen'ny Wifi isika mampiasa fitaovana iray Android. Saingy alohan'ny hanombohana dia te-hanao antso ho an'ny "Fair Play" sy ny fahasalamana aho: raha mamantatra ny tenimiafin'ny mpifanila vodirindrina izay mandoa ny fifandraisany izahay, izay toa tsy safidy dia ny manomboka misintona atiny mavesatra izay hampihena ny fifandraisany. Zavatra iray ny afaka manontany amin'ny Facebook, mijery pejy web roa na mandefa mailaka ary ny iray hafa dia ny misintona DVD Ubuntu, ohatra. Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha mangalatra ny Wi-Fi ataon'izy ireo amin'ny mpifanila trano aminy isika dia tsy tokony ho tsikaritr'izy ireo izany ary azony ampiasaina amin'ny 99.99%.
Ary mba tsy hampiharan'izy ireo anao io fomba io dia mety ho liana ianao fantaro hoe iza no mifandray amin'ny tamba-jotra WiFi anao. Eny eny, andao hojerentsika ny fomba esory ny WiFi mampiasa ny fitaovantsika Android.
1 Azonao atao ve ny manafoana ny lakilen'ny Wifi amin'ny Android?
2 Fampiharana hanafoanana ny lakilen'ny wifi maimaim-poana amin'ny Android
2.1 Ahoana ny famoahana ny lakilen'ny WiFi WEP amin'ny bcmon
2.2 Ahoana ny famoahana ny lakilen'ny WPA WiFi miaraka amin'ny bcmon + Reaver
3 Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny lakile Wifi amin'ny Android
3.1 Routgen Keygen
3.4 Famerenana ireo lakile voatahiry ao amin'ny fitaovantsika
4 Ara-dalàna ve ny fampiasana fampiharana hanapotehana ny lakilen'ny WiFi?
Azonao atao ve ny manafoana ny lakilen'ny Wifi amin'ny Android?
Eny, afaka mahita ny teny miafin'ny WiFi ianao. Indrindra fa raha manana tambajotra WEP ny tamba-jotra tsy misy tadiavinay hamoahana. Enkripsi izay zara raha ampiasaina intsony izy io, saingy mbola azo atao ny mahita tambajotra ao amin'ny WEP izay hanamora ny asantsika. Afaka mahazo lakilen'ny WEP amin'ny alàlan'ny herisetra isika ary kely sisa dia ho fotoana kely vao azontsika.
Raha manana ny tambajotra Fampidirana WPA, sarotra kokoa ilay zavatra. Ny famoahana ny lakilen'ny WPA dia mitaky izay fantatra amin'ny hoe "fifanomezan-tanana" ary tsy dia mora izany. Ny azo atao mora dia ny hahazoana lakilen'ny WPA izay tsy novaina. Tsotra be ny teôria: raha ny "orinasa Morrotel" no manolotra router amin'ny marika "Wifitel", ny lakile dia hitovy foana, fa tsy izy rehetra router hanana izany koa izy ireo. Midika izany fa hisy ohatra fanalahidy 1.000 an'ny router "Wifitel" hampiasain'i "Morrotel". Misy ny rindranasa sasany izay mitahiry ireto lakile ireto ary afaka manao an'io karazan-kery mahery io amin'ny alàlan'ny rakibolana misy. Ny rindranasa hafa dia mety hahatratra bebe kokoa.
Fampiharana hanafoanana ny lakilen'ny wifi maimaim-poana amin'ny Android
Ahoana ny famoahana ny lakilen'ny WiFi WEP amin'ny bcmon
Ilay mandeha tsara indrindra dia bcmon. Azo sintonina avy amin'ny HERE (misintoma fa mety hitera-doza ianao) ary fitaovana mahaliana be indrindra ahafahantsika mamaha ny lakilen'ny Wifi.
Eto izahay dia milaza aminao ny fomba fantaro ny teny miafin'ny WiFi miaraka amin'ity fampiharana ity, saingy tsy maintsy fantatrao fa tsy ny fitaovana rehetra no mifanentana.
Tokony hataontsika faka fitaovana iray mifanentana izay manana ny chipset Broadcom bcm4329 na bcm4330 Wifi, toy ny Nexus 7, ny Samsung Galaxy S, Galaxy Y, Nexus One, Desire HD, Micromax A67. Ny fomba tsara indrindra anaovana izany dia ny fametrahana ny Cyanogen ROM eo aminy.
Misintona, mametraka ary mampandeha bcmon izahay. Azo inoana fa tsy maintsy avelanao hametraka ny fampiharana tsy ofisialy avy amin'ny toeran'ny fitaovana.
Nilalao izahay tamin'ny «Mihazakazaha terminal terminal«, Izay hanokatra zavatra mitovy amin'ny Linux Terminal. Nanoratra izahay "airodump-de»(Raha tsy misy ny teny nalaina) ary mikasika ny Intro izahay. Io dia hampiditra ny fampiharana ilaina.
Dia manoratra izahay «airodump-ng wlan0»Ary tsindrio Enter indray.
Fantatray ny tamba-jotra izay tianay hamafana ny lisitry ny teboka fidirana izay ho hitanay. Tsy maintsy misafidy iray miaraka amina WEP encryption isika.
Manoratra ny adiresy MAC an'ny tamba-jotra nofidinay tamin'ny dingana 5. Manoratra koa ny fantsona misy ny tamba-jotra.
Manomboka manadihady ilay fantsona izahay mba hanangonana vaovao, zavatra mety maharitra ora maromaro. Hanao izany amin'ny alàlan'ny fanoratana isika (tsy misy teny nalaina) «airodump-ng -c fantsona # –Bssid Adiresy MAC -w vokatra ath0«, Izay tsipika misy ny fampahalalana momba ny tambajotra voafidy amin'ny dingana 5. Tsindrio ny enter ary hanomboka scanning ny Airodump. Ny tsara indrindra dia ny mamela ny fitaovana hanao ny asany, ka avelantsika ho irery mifandray amin'ny fivoahan'ny herinaratra izy io. Fonosana 20.000 XNUMX farafahakeliny tsy maintsy angonina, na dia arakaraka ny habetsahan'ny fanangonantsika aza, dia vao mainka mety hamaky ny lakile isika.
Raha vantany vao manana ny fonosana ilaina isika dia afaka manomboka manala ny lakile amin'ny alàlan'ny baiko «aircrack –ng output * .cap»(Tsy misy fitanisana foana) ary tsindrio enter.
Raha mahita ny hafatra "Nahita!" Isika dia efa manana izany. Hisy fanalahidy hex hiseho. Ohatra, raha hitantsika ny 12: 34: 56: 78: 90, ny lakile dia 1234567890.
Ahoana ny famoahana ny lakilen'ny WPA WiFi miaraka amin'ny bcmon + Reaver
Tokony hataontsika faka fitaovana mifanentana izay manana chipset Broadcom bcm4329 na bcm 4330 Wifi, toa ny Nexus 7, ny Samsung Galaxy S, Galaxy Y, Nexus One, Desire HD, Micromax A67. Ny fomba tsara indrindra anaovana izany dia ny fametrahana ny Cyanogen ROM eo aminy.
Nosintoninay ny Reaver .apk. Azo alaina amin'ny ITY FIAINANA ity.
Manokatra Reaver izahay ary manamafy fa tsy hampiasa azy io amin'ny fomba tsy ara-dalàna. Reaver dia hanamarina ireo teboka azo idirana.
Milalao amin'ny tambajotra izay te-hamaky izahay.
Raha mangataka antsika izy hanamarina raha ao anaty mode monitor dia andao hisokatra indray i SMmon ary jereo.
Izahay dia manamarina fa ao amin'ny Reaver dia mametraka ny boaty «Fikirana mandroso mandeha ho azy".
Nanomboka ny fanafihana izahay tamin'ny alàlan'ny fanindriana «Atombohy ny fanafihana»Ao amin'ny menio eo amin'ny farany ambany amin'ny Reaver. Hisokatra ny monitor ary ho hitantsika eo amin'ny efijery vaovao ny valiny.
Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny lakile Wifi amin'ny Android
Raha izany no tiantsika sitrana ny lakilen'ny Wifi antsika manokana amin'ny Android, azontsika atao amin'ny fomba samihafa izany.
Angamba ny fampiharana malaza indrindra dia Routgen Keygen. Araky ny anarany dia "generator lehibe ho an'ny router" ity fampiharana ity. Marina fa tsy mamaha ny lakileny izy io, saingy afaka manome antsika lakile fanalahidy ho an'ireto router manaraka ireto:
DLink (modely vitsivitsy fotsiny)
Verizon FiOS (modely vitsivitsy fotsiny)
FASTWEB Pirelli sy Telsey
Huawei (Infinitum sasany)
Jazztel_XXXX (Comtrend sy Zyxel)
Wlan_XX (maodely sasany)
boaty v1 sy v2 (TECOM)
Ny asany dia tsotra toy ny mijery ireo tamba-jotra misy, mikasika ny Supported na mety tsy tohanana ary mizaha toetra ny fanalahidy atolotray antsika. Manana fampahalalana bebe kokoa ianao ao ITY FIAINANA ity.
Sintomy ny router Router ao amin'ny Google Play
Tena mitovy amin'ny Router Keygen dia Wifi Manager. Misy rakibolana ihany koa izy io hahafahantsika mifandray router Tsy nanova ny teny miafina misy azy ireo izy ireo, saingy manana endrika tsara kokoa noho ilay rindranasa taloha. Ho fanampin'izany, manolotra karazana sarintany ihany koa izay hahitantsika ny toerana misy ireo tamba-jotra, izay ahafahantsika mifandray amin'ny tamba-jotra izay manome anay ny fifandraisana tsara indrindra.
Sintomy ny WiFi Manager ao amin'ny Google Play
Fampiharana iray hafa toa ny roa teo aloha dia WLANAudit, izay afaka mamaha ny lakile raha mbola ao amin'ny WEP izy ireo. Raha toa ka WPA ny tamba-jotra tianay hamafana dia tsy ho afaka izany. Ny fampiasana an'ity rindranasa ity dia tena tsotra: mikitika ny iray amin'ireo tambajotra maneho antsika izahay ary raha mahay manisa azy dia hanao izany. Raha tsy izany dia ho hitantsika fa miteny hoe "Tsy azo atao ny manisa".
Famerenana ireo lakile voatahiry ao amin'ny fitaovantsika
Afaka mahita ny lakile voatahiry ao amin'ny fitaovantsika, zavatra azontsika atao amin'ny fampiharana toa azy
Fanarenana Wifi Key (mila faka).
Fanarenana Wifi Key [ROOT].
Fanarenana tenimiafina Wifi [ROOT].
Ara-dalàna ve ny fampiasana fampiharana hanapotehana ny lakilen'ny WiFi?
Noël andininy 286 amin'ny lalàna organika 15/2003 hoy izy
"sazy enina ka hatramin'ny roa taona ary sazy enim-bolana hatramin'ny roa amby roa-polo volana, izay, raha tsy nahazo alalana avy amin'ny mpamatsy tolotra sy ho an'ny tanjona ara-barotra, dia manamora ny fahazoana miditra amin'ny serivisy fampielezam-peo amin'ny fahitalavitra na fahitalavitra. omena amin'ny alàlan'ny elektronika lavitra, na manome fidirana voafetra ho azy ireo, heverina ho serivisy mahaleo tena, amin'ny alàlan'ny: fanamboarana, fanafarana, fizarana, azo atao amin'ny alàlan'ny elektronika, fivarotana, fanofana na fananana fitaovana na programa solosaina, tsy nahazo alalana tany amin'ny mpikambana mpikambana iray an'ny eropeana Union […]”. Nasongadiny tamin'ny teboka faha-4 tamin'io lahatsoratra io ihany fa “na iza na iza mampiasa fitaovana na programa mamela alalana tsy fidirana amin'ny serivisy fidirana amin'ny fepetra na fitaovana fifandraisan-davitra, dia homena azy ny sazy voalaza ao amin'ny andininy 255 […]".
Raha tsorina tsy ara-dalàna izany ary, tsy mahagaga, ny ho lehibe kokoa ny sazy ho an'ireo izay manolotra asa fanompoana manenjika tenimiafina hahazoana tombony, izay azo saziana hatramin'ny roa taona an-tranomaizina. Midika izany fa tsy hiditra izy raha mandoa fifamatorana, satria ny kely indrindra hidirana soa aman-tsara dia roa taona sy indray andro, fa ho hita any am-ponja kosa ny taolany raha manana rakitra ratsy izy.
Raha efa nolazaina tetsy ambony ireo dia tsara kokoa ny mampiasa Wi-Fi antsika manokana ary manadino ireo olana mety hateraky ny fianarana mamaky ny lakilen'ny Wi-Fi. Na dia marina aza fa mety hangalatra ny fifandraisanay ny mpampiasa hafa. Raha irintsika izany ho voaro ny tenimiafintsika, tsara kokoa ny manao izao manaraka izao:
Ovay hafa ny teny miafina default.
Raha mampiasa encryption WEP ianao dia mivadika WPA izahay. Raha azo atao, mankany amin'ny WPA2.
Afeno ny tamba-jotra. Raha ny teôria dia hanakana ireo programa tsy hahita ny tambajotra izany ary raha tsy mahita an'io izy ireo dia tsy ho afaka hanangana fanafihana. Raha te hampifandray ireo fitaovantsika manokana dia tsy maintsy ataontsika ny anaran'ny tambajotranay (miaraka amin'ny takelaka ambony sy ambany indrindra), ny karazana tambajotra ary ny tenimiafintsika.
Nahavita namerina ny lakilen'ny Wifi anao ve ianao sa mianatra ny fomba famoahana ny lakilen'ny WiFi tsy fantatra?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Android cheat » Esory ny bokotra WiFi amin'ny Android
blas Rye dia hoy izy:
Salama maraina, azo apetraka amin'ny pc desktop rehetra izay mampiasa windows xp, 7,8 sns.
Mamaly an'i blas rye
eddy moya dia hoy izy:
Miarahaba: namako manana verizon LG vs980 aho ary tiako ho fantatra hoe rahoviana no hisy ny fanavaozana ny lollipop android 5
Mamaly an'i eddy moya
chago castañeda dia hoy izy:
Te hizara ny fifandraisana wifi an'ny sony expeira aho ary tsy fantatro izay rindranasa alaina
Mamaly an'i chago castañeda
laura figueroa dia hoy izy:
Androany dia hanandrana amin'ny manager wifi premium aho ary holazaiko anao izany !! Misaotra anao
Valio i laura figueroa
AlbertoNet dia hoy izy:
Ahoana no fomba fiasan'ny iray tamin'izy ireo?
Mamaly an'i AlbertoNet
Telephoners (@telephones) dia hoy izy:
Marina fa tsy niasa mihitsy izy ireo fa aleoko mijirika amin'ny solo-saiko….
Mamaly an'i Telefoneros (@telefoneros)
karen valverde dia hoy izy:
HELLO nomeraon-telefaona, ahoana no anaovanao hack amin'ny pc anao, lazao amiko fa tiako izany, nefa tsy misy fampiharana mety amiko
Mamaly an'i karen valverde
TSY MANOMPO AZA ,,, SHIT
Valiny amin'i MARIA
Ho ahy manokana, ny tsara indrindra nosedramako dia WifiPassword sy Pulwifi, tianao ny rindranasa tsara ho an'ny fitaovana Android mandeha tsara.
Mety ho an'ny fanamarinana na ho an'ireo fotoana ilanao tambajotra Wi-Fi ... 🙂
Adan Zapata dia hoy izy:
Mamaly an'i adan zapata
Ireo miarda ireo dia tsy manompo tsara kokoa noho ny fampiharana REVELAWIFI izay na dia tsy mamoaka decrypt daholo aza izy io fa mandeha tsara rehefa mahita ny tambajotra marefo
Andrezz Guerrero Lds dia hoy izy:
Raha hampiasa ny rindranasa dia tsy maintsy ampifandraisina amin'ny tambajotra toy ny aps hafa aho ???
Valiny tamin'i Andrezz Guerrero Lds
leonar dia hoy izy:
Tsy afaka namaha ny tamba-jotra tamin'ireto fampiharana ireto aho ..
Mamaly an'i leonar
cj dia hoy izy:
Mamaly an'i cj
tsy marina ny misintona tsara 😀
vsdvsdvsdvsdvsdvsdvsdv dia hoy izy:
Pejy izay amporisihinao nefa tsy fantatrao hoe inona marina izany. Tranonkala mahatsiravina. TSY AZO antoka ny teninao.
Mamaly amin'ny vsdvsdvsdvsdvsdvsdvsdv
arkaitz dia hoy izy:
Te hahafantatra ny fomba fanapahana ny kaonty miafina an'ny mafia ppgate opus dei misaotra aho
Mamaly an'i arkaitz
Ry olona, ​​lazaiko aminao fa ho an'ireo programa ireo, na programa inona na inona hipaoka Wi-Fi avy amin'ny telefaona finday, ny finday dia tsy maintsy "hokapohina" ary koa kilalao hamakiana lalao sarotra nefa mazava ho azy fa midika ho very zavatra an'arivony ary ny loza manimba ny telefaona finday. XD tsy mendrika izany
Valio i Davi
Salama, antenaiko fa io no tadiaviko
Salama, izaho i Laura Barrueta Flore. Tsia, ray inona? Nilaza zavatra toy izany tamiko ny namako Maite, saingy vetivety foana
Facebook…. Lizeth Esmeralda Hernandez gg nanampy XD ..
Mamaly an'i laura
Cristopher dia hoy izy:
Misy rindranasa tena tsara hahazoana ny tenimiafin'ny WIFI amin'ny router anao manokana rehefa namerina namerina ny finday ianao ary tsy te-handehandeha amin'ny router hijerena azy, raha mbola manana rafitra WPS ianao. Manompo amin'ny android 4.0 ary manaraka ny dikan-teny misy fanontaniana mateo.cristo91@gmail.com
Valiny tamin'i Cristopher
Mampifandray Android amin'ny MAC